Medieval Metal သည် folk metal ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး medieval folk ဂီတနှင့်အတူ heavy metal (သို့) hard rock ကို ရောစပ်ထားသည်။ medieval metal သည် ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ကန့်သတ်ထားပြီး mittlelalter-metal (သို့) mittelalter-rock ဟုလည်း သိကြသည်။ အမျိုးအစားသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအလယ်တွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကူညီထောက်ပံခဲ့သည့် တီးဝိုင်းများမှာ Subway to Sally, In Extremo နှင့် Schandmaul တို့ဖြစ်သည်။ ပုံစံသည် traditional folk နှင့် medieval အမျိုးမျိုးတူရိယာများကို အသုံးပြုထားသည်။
Medieval folk တီးဝိုင်း Corvus Corax ကို ၁၉၈၉ တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်အတွင်းတွင် ပထမဆုံး album ထွက်ရှိခဲ့သည်။ အုပ်စုသည် Cister, hurdy-gurdy, biniou, buccina, davul, riq နှင့် Cornetto Curvo တူရိယာများကို အားထားသည်။ shawm နှင့် bagpipe များကို ထင်ထင်ရှားရှားအသုံးပြုထားသည်။ medieval စာပေများမှ တေးဂီတများကို မွေးစားထားသည်။ ယခင် medieval ဂီတထက်ပို၍ အားကောင်းသည်။ အင်္ဂလိပ် folk metal တီးဝိုင်း Skyclad သည် ဤအမျိုးအစားကို လှုံဆော်လာပြီး ၁၉၉၀ တွင် သူတို့သည် သူတို့၏ “The Wayward Sons of Mother Earth” album ၏ track များတွင် တယောများကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ထို album တွင်ပါဝင်သော The Widdershins Jig သည် အရေးပါသော ပထမဆုံး metal ဟု ချီးကျူးခံရသည်။ folk metal ကို စတင်တီထွင်သည်သာမက medieval metal တီးဝိုင်းများကိုပါ လှုံဆော်ခဲ့သည်။
အရှေ့ဂျာမနီတီးဝိုင်း Subway to Sally ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ folk rock တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး သီဆိုပုံမှာ အိုင်ယာလန်နှင့် စကောတလန် ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ သူတို့၏ ဒုတိယ album MCMXCV ကို ၁၉၉၅ တွင် ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ဂျာမနီဘာသာဖြင့် သီဆိုခဲ့သည်။ Skyclad တီးဝိုင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်သည်။ Subway to Sally သည် hard rock နှင့် heavy metal ဂီတတို့၏လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်သည်။ သူတို့၏ ဇာတိဖြစ်သော ဂျာမနီတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
↑ Duden - Das neue Wörterbuch der Szenesprachen ("The new Dictionary of Scene Languages") (in German). Bibliographisches Institut AG. ISBN 978-3-411-71092-8။
↑ Landers, Mikki။ In Extremo။ Deutschmusikland.com။ 2008-03-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Medieval_metal&oldid=396447" မှ ရယူရန်